२ सय ५६ स्थानीय तहमा कसले कहाँ जित्यो ? (सूचिसहित) « Ramechhap News
२ सय ५६ स्थानीय तहमा कसले कहाँ जित्यो ? (सूचिसहित)
दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव भएका ३५ जिल्लाका ३ सय ३४ स्थानीय तहमध्ये २ सय ५६ तहको आधिकारिक परिणाम सार्वजनिक भएको छ । अहिलेसम्म ३५ मध्ये २० जिल्लाका सबै स्थानीय तहको मतणना भइसकेको छ ।
अहिलेसम्म पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमाझैं नेकपा एमालेले नै अग्रता लिएको छ । दोस्रोमा नेपाली कांग्रेस र तेस्रोमा माओवादी केन्द्र्र रहेको छ । एमालेको फराकिलो अग्रतालाई नेपाली कांग्रेसले साँघुरो पार्दै लैजाँदा अहिले दुई दलको फरक १० र १२ सिटको वरिपरि भइरहेको छ । एमालेले प्रदेश नम्बर १ मा ५०, प्रदेश ५ मा २९ र प्रदेश ७ मा ३३ स्थानीय तह जितेर १ सय १२ स्थान सुरक्षित गरिसकेको छ ।
माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर १ मा ८, प्रदेश ५ मा १६ र प्रदेश ७ मा ७ स्थानीय तह जितेर ३१ सिटसहित तेस्रो स्थान सुरक्षित गरेको छ । यस्तै, संघीय समाजवादी फोरमले प्रदेश नम्बर ५ मा ५ र प्रदेश नम्बर १ मा एक स्थानीय तह जितेर ६ सिटसहित चौथो स्थानमा रहेको छ । फोरम लोकतान्त्रिकले प्रदेश नम्बर १ मा २, ५ मा १ र ७ मा एक स्थानीय तह जितेर ४ सिटसहित पाँचौं स्थानमा रहेको छ ।राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाले दुर्इरदुर्इ स्थानीय जितेका छन् भने राष्ट्रिय जनता पार्टीका स्वतन्त्र उम्मेदवारले एक स्थान जितेका छन् ।
झापा, कन्ककाई नगरपालिकाः राजेन्द्र पाेखरेल
ओखलढुंगा, लिख् गाउँपालिकाः गोविन्द पौडेल
कैलाली, गाेदावारी नगरपालिकाः हरिसिंह साउद
प्यूठान, नौबहिनी गाउँपालिकाः शिव रिजाल
अछाम, रामारोशन गाउँपालिकाः झंकर साउद
कपिलबस्तु, शुद्धोधन गाउँपालिकाः निसार अहमद खाँ